TRF ao amin'ny gazety 2016 | Gazety momba ny valisoa sy ny aterineto
Home TRF ao amin'ny Press 2016
Nahita Ny The Reward Foundation ny fampahalalam-baovao ary nanaparitaka ny teny momba ny asantsika, anisan'izany ny kilasin'ny fanentanana amin'ny pôrnôgrafia; ny antso ho amin'ny fanabeazana mahomby, atidoha amin'ny ati-doha amin'ny sekoly rehetra; Mila fampiofanana ho an'ny mpitsabo NHS momba ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika sy ny fandraisanay anjara fikarohana amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ateraky ny sary vetaveta. Ity pejy ity dia manasongadina ny sasany amin'ireo fahombiazantsika tamin'ny gazety.
Gazety sy Internet
Oktobra 2016. Mary Sharpe dia manasongadina amin'ity fanehoan-kevitra nataon'i Dr Linda Hatch momba ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny filan'ny nofo any UK ity.
The Sunday Times - Fanontana Skotlandia, 21 Aogositra 2016
Azo jerena anaty aterineto ny dikan-teny nampiasaina ivelan'ny Ecosse Eto. Mila fisoratana anarana izany, na dia afaka misoratra anarana amin'ny tantara roa maimaim-poana isan-kerinandro aza ianao. Nampiasaina tamin'ity tantaram-baovao Kroaty ity ihany koa ny lohateny NAVUČENI NA PORNIĆE Avy amin'ny tovona pa- mamaritra ny fitaona ankehitrinin'ny endriky ny atao, nosoratan'i Ana Muhar.
Ny Scottish Daily Mail dia nanaraka ny tantaran'ny Times indroa. Ity aloha dia nanolotra ity manaraka ity…
Ny ampitson'io dia nampiasa hevitra Reward Foundation maro tao amin'ny mpitarika azy…
Ny mpianatra ao amin'ny iray amin'ireo sekoly tsy miankina indrindra any an-drenivohitra dia napetraka mba hahazoana "kilasim-pirahalahiana" ao amin'ny kilasin'ny fiankinan-doha.
Fettes College, izay manisa ny praiminisitra teo aloha Tony Blair teo anivon'ireo alimniany, dia nanasa manam-pahaizana momba ny aterineto mba hihaona amin'ireo mpianatra taorian'ity taona ity.
Izany dia aorian'ny fisian'ny fikarohana fiterahana mifandraika amin'ny fijerena maharitra ny pôrnônôma amin'ny fahasimbana eo amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny tsy fahampian-tsakafo.
Nisy ihany koa ny fanambarana fa ny fiankinan-doha dia afaka manimba ny fandalinana, ny fanantenana sy ny fifandraisana amin'ny hafa, miaraka amin'ny fampitandremana fanampiny fa afaka mihalalina izy ireo hijery sary tsy ara-dalàna momba ny fanararaotana ankizy.
Mary Sharpe, mpisolovava sady mpanorina ny The Reward Foundation, fiantohana izay mampiroborobo ny fifandraisana tsara, dia nanome lesona amin'ny fahatsiarovan-tena vetaveta ao amin'ny George Heriot sy Dollar Academy ao Stirling.
Loharano iray akaikin'ny iray amin'ireo sekoly no niteny fa "feno herisetra sy mivantana" ireo foto-drafitr'asa mikasika ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia, miaraka amin'ny loharano iray hafa milaza azy ireo ho "mahaliana sy manan-danja".
Ary ilay fomba fitsinjarana dia tena nahasoa indrindra fa i Fettes - izay mitaky ny saram-pandraharahana amin'ny £ 32,200 isan-taona - dia nanapa-kevitra ny hanangana izany.
Nilaza i Sharpe fa nasaina nanafatra ilay kilasy izy taorian'ity taona ity. "Ireo sekoly ireo dia mahatsapa ny vokatry ny pôrnôgrafia manimba ny fototarazo izay mety ho an'ny mpianatra, amin'ny fahasalamany ara-tsaina sy ny fianarany", hoy i Sharpe.
Ny fotony dia nanangona antsipirian'ny tranga an'arivony amin'ny tovolahy avy any Grande-Bretagne sy any ivelany izay efa niresaka momba ny fiantraikany amin'ny fiankinan-doha.
Tahaka ny fampidinana zava-mahadomelina, nampitandrina i Sharpe fa mitombo ny taham-pandevozan'ny pôrneptika amin'ny fitazonana mitohy ary mety hivoatra ny fahazaran-drizareo, miaraka amin'ireo mpampiasa mikaroka fitaovana mihetsiketsika mba hanomezana fahafaham-po azy ireo.
"Ny zatovolahy dia afaka mivoatra haingana avy amin'ny pôrnôjia marefo amin'ny pôrnôgrafia, porno fetisika ary ny pôrnigny ankizy maloto, mba hanomezana fahafaham-po ny filoham-panahin'izy ireo," hoy izy nanampy.
Nilaza i Cameron Wyllie, talen'ny George Heriot, fa: "Tena zava-dehibe ny fanararaotan'ny tanora ny loza mety hitranga amin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny alalan'ny siansa siantifika izay mampiseho fa ny fampiasana tafahoatra ny pôrnôgrafia dia ara-tsaina sy ara-tsaina.
"Ny fisian'ny porofo dia mitombo hatrany ny fijerena sary vetaveta amin'ny alàlan'ny aterineto, izay mora azo amin'ny alalan'ny smartphones sy tablety, dia mamela ny zatovolahy ary mamela azy ireo tsy afaka manambady vehivavy."
Tamin'ny volana Jona, NHS Lothian niantso an'i Sharpe hihaona amin'ny mpiasa ao amin'ny klinika momba ny fahasalamana ara-pahasalamana ao Chalmers Street mba hanairana ny fahatsapana ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny sainan'i Angletera ao amin'ny Huffington Post dia namoaka izao manaraka izao Tantara tamin'ny 22 Aogositra 2016. izahay dia nanasongadina hevitra tsara avy amin'ny mpamaky any Etazonia.
Ny Independent dia namerina indray, indrindra fa ny tantaran'ny Sunday Times, azo jerena Eto.
Nalaza be ihany koa ny haino aman-jery iraisam-pirenena, toy ny lavitra i Vietnam ary Indonezia.
Ny fiantrana napetraky ny mpisolovava dia mamoaka lahatsoratra momba ny voka-dratsin'ny sary vetaveta
Fiantrana natsangan'ny mpisolovava iray no namoaka taratasy momba ny vokatry ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet.
Mary Sharpe, mpikambana tsy mpihaino ao amin'ny Faculty of Advocates, fialana havaozina hanorina ny Valin'ny Fanamarinana, fiantrana izay mikendry ny hahalala bebe kokoa ny fahitan'ny olona ny fiasan'ny atidoha sy ny fomba fifandraisany amin'ny tontolo iainana ary koa ny fanatsarana ny fahasalamana amin'ny fanamafisana ny fahalalan'ny daholobe amin'ny fanorenana ny faharetana amin'ny fihenjanana.
Ao amin'ny taratasy vaovao avy amin'i US Navy ireo dokotera sy ny valin'ny Fanamarinana, mitondra ny lohateny hoe "Mijery Internet ve ny Pornography Internet? A Review amin'ny Clinical Reports", Ny soso-kevitra momba ny fampiasana sary vetaveta amin'ny aterineto dia mety hiteraka olana ara-pananahana na dia amin'ny mpandinika tsara aza. Ireo izay manomboka mampiasa mandritra ny vanim-potoanan'ny fandrosoana lehibe amin'ny fahamaotinana sy ny adolescence dia tena mora marefo.
Mpifidy maromaro sy mpitarika mpanao heloka bevava maro no naneho ny tahony noho ny herin'ny sary vetaveta amin'ny fitondran-tenan'ny tanora Scottish Legal News.
Nilaza i Ms Sharpe fa mihevitra izy fa ny fiakaran'ny heloka bevava dia mety "hozarain'ny fampiasana fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet".
Hoy izy nanampy: "Tsy misy fisalasalana fa ny fanaovana herisetra ara-tantara ara-tantara sy ny olona maro manatona hitatitra ny fanolanana amin'ny fanaovana firaisana dia mandray anjara amin'ny fanaraha-maso tsaratsara kokoa ataon'ny mpitandro filaminana, fa eo ambanin'izany, ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika sy ny fanivanana ny atidoha amin'ny herisetra sy ny fiankinan- Ny fiovan'ny atidoha mifandraika dia tokony hilalao koa.
"Tokony horaisin'ny manampahefana mpanao heloka bevava ao anatin'izany ny manampahefana ara-panabeazana sy ara-pahasalamana raha toa ka mahita ny fihenan-keloka amin'ity sehatra heloka ity".
Aogositra 22, 2016. Fanatsarana ny sekoly
Ny mpisolovava Mary Sharpe dia nahavaky lohateny vao haingana taorian'ny nanoratany fa ny sekolin'i Tony Blair teo aloha dia hanome kilasy “fahatsiarovan-tena amin'ny pôrnôgrafia” ao anatin'ny tahotra sao hisy vokany ratsy eo amin'ny mpianatra izany.
Fettes College any Edinburgh, iray amin'ireo sekolim-panjakana tsy miankina UK indrindra, dia nanasa an-dRamatoa Sharpe, mpanorina ny fikambanana mpanao asa soa Reward Foundation, hiteny amin'ny mpianatra any amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Ary ankehitriny ny drafitra dia nipoitra hampidirana ireny kilasy ireny eto amin'ny ezaka amin'ny fanalàna ny mpianatra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny fampitandremana azy ireo momba ny voka-dratsin'ny fanandevozana.
Niresaka tamin'ny Belfast Telegraph, Darryl Mead, vadin'i Ms Sharpe sady filohan'ny Reward Foundation, izay mampiroborobo ny fifandraisana salama, dia nilaza tamin'ny Belfast Telegraph fa i Irlandy Avaratra no tao anaty fandaharam-potoana.
"Izaho sy i Mary dia manao famelabelaran-kevitra miaraka any an-tsekoly ary tena liana amin'ny fanaovana fotoam-panofanana manerana ny faritany izahay," hoy i Dr Mead.
“Mbola tsy nanana andrim-panjakana manokana tao an-tsainay izahay, saingy ao amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao i Irlandy Avaratra ary misokatra be izahay hanome kilasy amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary fitsipi-pitenenana.
“Faly koa izahay manome fizarana isan-karazany ho an'ny zazalahy sy zazavavy satria samy hafa ny fepetra takian'izy ireo rehefa hianatra momba ny pôrnôgrafia.”
Nolazain'i Ramatoa Sharpe tamin'ny Radio Ulster's Nolan Show omaly fa, na dia mifampiraharaha amin'ny ankizy 16 sy 17 taona voalohany aza izy ireo dia mikendry ny manomboka manabe ny ankizy amin'ny taona faramparany amin'ny fianarany ambaratonga voalohany.
"Ny fikarohana dia mampiseho fa ny salan'isan'ny ankizy dia manomboka mitady sary mitanjaka ary ny toa azy dia 10 taona," hoy izy.
"Ankehitriny, omen'ny Internet azy ireo ny zava-drehetra amin'ny tsindry ny totozy na ny fikolokoloana ny rantsan-tànana, ka raha te hiaro ny ati-dohan'ireo ankizy isika rehefa tena mora volavolaina izy ireo dia tokony hampahafantarintsika azy ireo izao."
Nilaza ilay mpisolovava fa na dia “tsy manimba” aza ny fijerena pôrnôgrafia sy ny fitanjahana fotsiny », dia atahorana ho lasa vavahady mankamin'ny fitaovana mazava kokoa, mety hanimba.
"Ny ati-doha dia mankaleo zavatra iray rehefa nahita azy imbetsaka ary mitaky zava-baovao ary tena mora ny miakatra amin'ny pôrnôgrafia mahery vaika sy pôrnôgrafia mahery setra ary ny ankizy dia taitra amin'izany," hoy izy. “Mianatra zavatra diso rehetra amin'ny Internet izy ireo ary manimba azy ireo izany.”
Ny fahaketrahana sy ny ADHD (fihenanam-pihetseham-po mahakasika ny tsy fahampian-tsakafo) dia roa amin'ireo olana ara-pahasalamana ara-tsaina Ms Sharpe mifandray amin'ny pôrnôgrafia.
Niresaka momba ny olana mitombo eo amin'ny tsy fahampiana erectile eo amin'ny lehilahy 20 taona koa izy “satria efa nijery sary vetaveta tamin'ny fahazazany izy ireo”.
"Tsy mitsahatra ny fientanentanan'ny mpiara-miasa aminy na ny filana ara-nofo ara-dalàna izy ireo satria ny ati-dohan'izy ireo dia zatra manaitaitra amin'ny Internet," hoy izy.
“Raha tokony hianatra momba ny fomba firesaka amin'ny tovovavy sy hifikirana tànana ary hanao ireo dingana malefaka rehetra izy ireo, dia miharihary amin'ny fitaovana tafahoatra.”
DUP MLA Nelson McCausland dia niarahaba ny hetsika mba hametrahana ny kilasy ho an'ny ankizy eo an-toerana, ary nilaza fa "marina ny tokony hampianarana ny tanora ny loza ateraky ny pôrnôgrafia".
"Misy fahatsiarovan-tena lehibe androany momba ny toetra mampidi-doza amin'ny fitaovana toy izany sy ny fomba fiantraikany amin'ny ati-dohan'olombelona," hoy izy. “Izay rehetra manampy ny tanora hanana fomba fiaina salama kokoa ary hahafantatra ny loza toy izany dia zavatra tsara.”